YEM MODEM ADỊGHỊ ARỤ ỌRỤ - NGWA - 2019
Idozi modem Yota
Ọtụtụ ndị ọrụ mgbe ha na-arụ ọrụ na VirtualBox na-eche nsogbu nke ijikọ ngwaọrụ USB na igwe arụmọrụ. Njirimara nke nsogbu a dị iche: site n'aka onye na-enweghị njikwa na-akwado nkwado nke njehie "Enweghị ike jikọọ ngwaọrụ USB Amaghị ama ngwaọrụ igwefoto".
Ka anyị nyochaa nsogbu a na ngwọta ya.
Na ntọala enweghị ike ịgbanwere onye njikwa ahụ
Edozi nsogbu a site na ịwụnye ngwugwu ndọtị. Ntugharị Mgbakwunye VirtualBox maka mbipute nke usoro ihe omume a. Ngwongwu ahụ na-enye gị ohere ịgbanye eriri USB ma jikọọ ngwaọrụ na igwe kwadoro.
Kedu ihe bụ VirtualBox Extension Pack
Enweghi ike ijikọ Ngwaọrụ Unknown
Enweghị ike ịghọta ihe kpatara nsogbu ahụ. Ikekwe ọ bụ ntụgharị nke "ntụgharị" nke mmejuputa nkwado USB na ngwugwu mgbakwunye (lee n'elu) ma ọ bụ nchịkọta gụnyere na usoro nnabata. Ka o sina dị, e nwere ngwọta (ọbụlagodi abụọ).
Usoro nke mbụ na-egosi ihe ndị na-esonụ:
1. Jikọọ ngwaọrụ na igwe kwadoro n'ụzọ dị mma.
2. Mgbe njehie mechara, regharịa igwe ahụ.
Na-emekarị, na-eme omume ndị a, anyị na-enweta ngwaọrụ arụ ọrụ jikọtara na igwe arụmọrụ. Agaghị emezi njehie, mana naanị na ngwaọrụ a. Maka mgbasa ozi ndị ọzọ, usoro a ga-eme ugboro ugboro.
Usoro nke abuo na - enye gi ohere ka ị ghara ime ihe n 'ajuju oge obula ijiri kpoo ohuru, ma n'otu uzo wepu ihe ntanet USB n'ime igwe.
Iji mee nke a, ịkwesịrị idozi ndekọ Windows.
Ya mere, mepee nchịkọta akụkọ ma chọta alaka ụlọ ọrụ ahụ:
HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM CurrentControlSet Control Class [36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}
Ọzọ, chọọ isi a kpọrọ "UpperFilters" ma hichaa ya, ma ọ bụ gbanwee aha ahụ. Ugbu a, usoro ahụ agaghị eji eriri USB.
Ndokwa ndị a ga - enyere gị aka dozie nsogbu ahụ na ngwaọrụ USB na VirtualBox arụmọrụ igwe. N'eziokwu, ihe kpatara nsogbu ndị a nwere ike ịbụ ọtụtụ, ọ bụghị mgbe niile ka a ga-edozi ha.